Vaovao - Fanofanana momba ny asa fitoriana
Androany, mandeha amin'ny fiofanana mahaliana momba ny asa fitoriana izahay.
Ny fananganana ekipa dia tsy isalasalana fa fomba mahomby hanamafisana ny firaisan'ny ekipa. Na izany aza, ity fananganana ekipa ity dia somary tsy mitovy amin'ny taloha. Ny fananganana ekipa teo aloha dia vondrona mpiara-miasa mahazatra izay miara-miala voly. Amin'ity indray mitoraka ity, ny tsy itovizany dia ny mpiara-miasa tsy fantatra sasany miara-mandroso.
Avy amin'ny tsy mahazatra ka hatramin'ny mahazatra, mety mitaky fotoana kely ho an'ny olona sasany izany, ary ny fananganana ekipa tsy isalasalana fa tena mampihena ireo fotoana ireo, fa ny zavatra ilaintsika dia tsy ny fahazarana fotsiny amin'ny fiainana, fa koa ny fahatakarana ny volan'ny asa, angamba ny fahazarana amin'ny hevitra momba ny asa dia mety ho mitsambikina amin'ny valin'ny 1 + 1> 2, na ny herin'ny fiaraha-miasa ...
Lahatra ny fihaonana ary tsy fahita firy ny fifanarahana. Lahatra iarahan'ny tsirairay miasa miaraka amin'ny tanjona iraisana. Mety ho sarotra ny fizotrany, ary mety misy zavatra tsy mampino maro, fa toy ny tetik'asa "fanamby tsy azo atao" dia mety tsy ny olana no olana fa ny sakana ara-tsaina.
Tena sarotra ny miala miverina 10.000. Tsy irery isika. Vondron'olona izahay. Manana namana maro hanampy anao izahay amin'ny sarotra. Mora vaky ny chopstick, fa ny chopstick kosa sarotra vahana. Tsy ny herin'ny firaisana ve izany?
Tamin'ny andron'ny hetsika dia tsy ny fanahin'ny firaisankina sy ny fiaraha-miasa fotsiny izany, ary ny fanahin'ny tsy kivy na ny hahafoy azy, fa koa ny fanoloran-tena sy fahatsapana ny fanompoana ho azy ireo. Soa ihany koa aho fa afaka miditra haingana amin'ilay hetsika ary manao ny anjarako amin'ny zorony ilaina.
Na dia teo aza izany, tsy nanao tsara ihany koa izahay. Mety tsy hanaja ny hafa isika, tsy hanaraka ny lalàna, tsy hanisy fiheverana ny antsipiriany, ary mahafantatra manokana ny lesoka amin'ny tsy fahatokisan-tena sy fiankinan-doha. Saingy tsy ilaina ny manamarina ireo lesoka ireo. Diso ny tsy mety ary ny fahalalana ny tsy mety dia manatsara azy bebe kokoa. Raha tsapanao ireo lesoka ireo tamin'ny fananganana ekipa dia azonao ahitsy izany. Na izany aza, misy lesoka vitsivitsy, ary rehefa diso izy ireo dia mety hiteraka fatiantoka tsy hita isa. Mila alamina daholo, jerena mialoha ary hanana maso hijerena olana.
Araho ny lalàna, miaraha miasa, sorohy ny lesoka, ary ho tonga haingana any amin'izay alehanao ianao. Angamba ao anatin'ity sambo vaventy ity dia misy olona mandray ny tenany ho mpandeha ary vonona hankafy ny fiainana na hiala sasatra amin'ny tenany; angamba rehefa ny mpanamory fiaramanidina na ny kapiteny izy ireo dia mila mavitrika. Heveriko fa na manao ahoana na manao ahoana toe-tsaina io dia tsy misy isalasalana fa tsy hisy fiantraikany amin'ny olona manodidina anao sy ny fandrosoana ankapobeny izany. Fa ny fahafahana mifaninana amin'ny fotoana mavitrika, mifantoka amin'ny vokatra ary miara-miasa amin'ny firaisankina dia ho mora ny hahomby haingana sy hahatratra ny tanjonao.
Ny fitoviana eo amin'ny asa, ny fiainana ary ny lalao dia afaka mamintina ny traikefa ary manampy amin'ny fitomboana. Ity hetsika fananganana ekipa ity dia tsy nahasoa anay betsaka fotsiny, fa nanenjana ny elanelana misy eo amin'ny mpiara-miasa ary nahatonga anay ho ekipa tsara kokoa. Sambo iray, fianakaviana iray, lalana iray, mandroso miaraka!